Ny famitahana harena - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Ny famitahana ny harena
Nisy gazety iray nitatitra fa mihamitombo ny olona mahita ny dikany sy ny dikany amin'ny fiainany ao amin'ny mantra "Mividy aho, noho izany aho". Ho fantatrao ity fanovana mahatsikaiky feno fehezanteny fanta-daza malaza ity: "Heveriko fa io no nahatonga ahy". Saingy ny kolontsainan'ny mpanjifanay dia tsy mila fananana be intsony. Ny zavatra ilain'ny kolontsaintsika dia ny fahamarinan'ny filazantsara, dia ny fanambaran'Andriamanitra ho an'ny tena: Izaho no Izaho; izany no antony maha eto anao! Tahaka ny olona maro ankehitriny, ny tovolahy manan-karena dia nanambara ny tenany niaraka tamin'ny fananany sy ny fananany ao amin'ny Filazantsaran'i Marka. Voafitaka ao amin'ny fisainany izy ary noheveriny fa ny fiadanany eto sy dieny izao dia miantoka ny hareny ara-batana ary ny fiainana mandrakizay dia azo antoka amin'ny asany tsara.
Nanontany an’i Jesosy ilay mpanankarena hoe inona no tokony hataony mba handovany ny fiainana mandrakizay. “Zavatra iray no tsy ampy anao. Mandehana any, amidio izay rehetra anananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia hanaraka Ahy! (Markus 10,21). Namaly ny fanontaniany i Jesosy tamin’ny filazana taminy mba hahafoy ny fitiavany ny fananany fa hameno ny fony amin’ny hanoanana ny fahamarinana. Ny valintenin’i Jesosy dia tsy ny amin’izay azon’ilay mpanankarena atao ho an’i Jesosy, fa izay azon’i Jesosy atao aminy. Nangataka an’ilay lehilahy i Jesosy mba hiala amin’ny fitokisany amin’ny zavatra ara-nofo, ny fiheverana fa afaka mifehy ny fiainany manokana izy, manolotra ny tenany ho an’Andriamanitra ary matoky ny filaminan’Andriamanitra. Nanao fanamby an’ilay lehilahy i Jesosy mba hanaiky ny harena mandrakizay amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fanomezan-toky tanteraka ny fiainana mandrakizay miorina amin’ny fahamarinan’i Jesosy. Natolotr’i Jesosy ho anisan’ny mpianany ilay mpanankarena. Indro ny fanolorana avy amin’ny Mesia mba hiara-mandeha aminy, hiara-mipetraka aminy, ary hiara-mandeha aminy isan’andro sy amin’ny fomba akaiky. Ilay mpanankarena dia tsy nanao tsinontsinona ny tolo-kevitr’i Jesosy na nolaviny aloha loatra. Ny fandikan-teny iray dia nanamarika fa taitra ilay mpanankarena ary nandeha tamim-pahoriana sy nanaintaina. Tsapany ny fahamarinan’ny fizahana nataon’i Jesosy, saingy tsy afaka nanaiky ny fanafodiny natolotra izy.
Tadidio fa ilay tovolahy mpanankarena dia faly tamin'ny tenin'i Jesosy tamin'ny voalohany. Natoky izy fa nankatò an 'Andriamanitra, nitandrina ny didiny "hatramin'ny fahazazany" (and 20). Tsy ny faharetana na ny fanesoana no navalin'i Jesosy azy fa tamin'ny fitiavana: "Jesosy nijery azy ka tia azy" (and 21). Miaraka amin'ny fangoraham-po marina i Jesosy dia namantatra haingana ny sakana nanakana ny fifandraisan'ity lehilahy ity tamin'Andriamanitra - ny fitiavana ny fananany ara-batana ary ny finoana fa ny fankatoavany manokana dia mety hahazo fiainana mandrakizay.
Toa ny fananan'ity lehilahy ity ny fananany. Ny manan-karena dia manana fanoharana mitovy amin'izany amin'ny fiainany ara-panahy. Niasa teo ambany fihevitra diso izy fa ny asany tsara dia manery an'Andriamanitra hanome azy fiainana mandrakizay. Noho izany, tokony hanontany tena amin'ny tenanao ianao hoe: "Iza na iza no mifehy ny fiainako?"
Miaina ao amin'ny kolontsaina mpanjifana mifantoka amin'ny lafiny iray isika, amin'ny lafiny iray, mandoa ny serivisy molotra mankany amin'ny fahafahana sy ny fahaleovantena. Amin'izay fotoana izay anefa, dia mahatonga antsika ho matsiro ny tsy fanekentsika ny tenantsika amin'ny adidy manandevo, mividy, mividy ary mandray ny fananany, ary hiakatra ny mpitarika ara-tsosialy sy toekarena amin'ny fahombiazana. Isika ihany koa dia miatrika kolontsaina ara-pinoana iray izay manantitrantitra ny asa tsara ho fanalahidin'ny famonjena, na farafaharatsiny milaza fa ny asa tsara dia manana anjara toerana lehibe amin'ny hoe mendrika ny famonjena isika na tsia.
Mampalahelo fa misy Kristiana manadino izay itarihan’i Kristy antsika sy ny fomba hahatongavantsika any amin’ny farany. Nanorina ny hoavintsika azo antoka i Jesosy, rehefa nilaza tamin’ny mpianany hoe: “Minoa an’Andriamanitra ary minoa Ahy. Misy trano be dia be ao an-tranon'ny raiko. Raha tsy izany, dia ho nilaza taminareo va Aho hoe: Handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho? Ary rehefa handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka hitondra anareo ho atỳ amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo. Ary izay alehako dia fantatrareo ny lalana » (Jaona 14,1-4). Fantatry ny mpianatra ny lalana.
Tsarovy fa Andriamanitra dia izy ary tia anao ary mamela anao. Amin'ny fahasoavany dia manolotra anao ny harena rehetra amin'ny fanjakany i Jesosy. Io no fototry ny zavatra inoanao rehetra, io no loharanon'ny famonjenao. Mihetsika aminy amim-pankasitrahana sy fitiavana, amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao sy ny sainao rehetra.